Matuidi oo isku diyaarinaya inuu ka tago Juventus & saddex kooxood ay ka mid tahay Man United oo doonaya inay la saxiixdaan – Gool FM
(Italy) 22 Luulyo 2019. Wey iska cadahay in Blaise Matuidi uu yahay xiddiga labaad ee ka tagaya kooxda Juventus inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, kaddib imaatinka xiddigo cusub iyo tababare Maurizio Sarri.
Kaddib Sami Khedira oo si xoogan ugu dhow inuu ku biiro horyaalka Turkiga, Blaise Matuidi ayaa sidoo kale noqon kara xiddiga kale ee ka tagi kara kooxda Juventus.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in maamulka kooxda Juventus ay go’aamiyeen qiimaha ay doonayaan inay ku iibiyaan Blaise Matuidi, kaasoo gaarsiisan 20 ilaa iyo 25 milyan euro.
Sida laga soo xigtay wargeyska “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga waxaa jira saddex kooxood ee isha ku haya xaalada 32 jirkan reer France, si ay u helaan adeegiisa inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Kooxaha ilaa iyo haatan xiiseenaya adeega Blaise Matuidi ayaa waxay kala yihiin Manchester United, Paris Saint-Germain iyo Monaco.